Kudutshulwe kwabulawa owayelingisa kuGenerations | News24
LAST UPDATED: 2018-07-21, 07:22
Kudutshulwe kwabulawa owayelingisa kuGenerations
Johannesburg – Lowo owayengumlingisi weGenerations nobengumsakazi weJozi FM DJ kubika ukuthi udutshulwe wabulawa yizigebengu.
I-SABC ngoMsombuluko ekuseni ibike ukuthi uMandla Hlatshwayo udutshulwe wabulawa ngeSonto ebusuku esigamekweno sokuphanga esenzeke eSoweto.
OLUNYE UDABA: UMolefe angazihluphi ngokuya emsebenzini
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Hitler Mgwenya uthe babili abantu abadutshulwe endaweni yobumnandi ePimville ngeSonto ebusuku, kodwa akazange afune ukudalula amagama abo ngaphambi kokuba kwaziswe abomndeni.
“Isigameko senzeke ngo-23:00. Abasolwa abane ebebehlomile bangene endaweni yobumnandi babamba inkunzi abantu. Izisulu ezimbili bezizama ukusiza abanye abantu ebebebanjwa inkunzi," kusho uMgwenya etshela iNews24.
WATCH: Salads encased in jelly and other bizarre retro foods we bet you'd never touch